အစားကြူးပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များ - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
အစားကြူးပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များ
11 Jan 2018 . 5:53 PM
ဂေါတမဘုရားရှင် ပွင့်တော်မူတုန်းက ကောသလမင်းကြီးဟာ ဆန်တစ်အိတ်နဲ့ ဆိတ်တစ်ကောင်တောင် ပွဲတော်တည်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစားအသောက်ဆိုတာ သင့်တင့်ရုံသုံးဆောင်မယ်ဆိုရင် ဆေးဝါးသဖွယ် ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုပေမယ့် လွန်ကြူးသွားရင်တော့ ဘေးဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးမှာတော့ သမိုင်းအဆက်ဆက်မှာ အစားကြူးပြီး ကွယ်လွန်သွားကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(၁) မဟာ အလက်ဇန်းဒါးဘုရင် (Alexander the Great)
ဘီစီ ၃၆၅ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားတဲ့ မဟာ အလက်ဇန်းဒါးဘုရင် (Alexander the Great) ဟာ (၃ဝ) အရွယ်မှာ အကြီးမားဆုံးအင်ပါယာတစ်ခုကို ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး အိုင်အိုနီယန်ပင်လယ် (Ionian Sea) မှ ဟိမဝန္တာတောင်တန်း (Himalayas) အထိ ကျယ်ပြန့်ခဲ့ပါတယ်။ ဥရောပတိုက်တောင်ပိုင်း ဂရိနိုင်ငံ (Greece) မှာ အာရှတိုက် အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းအထိ နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်း မရှိသောကြောင့် အတုမရှိစစ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘီစီ ၃၂၃ခုနှစ် အသက် (၃၃) နှစ်မှာ နတ်ရွာစံခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အစားကြူးတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး နှစ်ရက်ဆက်တိုက် မအိပ်ဘဲ စားသောက်တဲ့အခါမှာ ဖျားနာပြီး (၁ဝ) ရက်ကြာတဲ့အခါ နတ်ရွာစံခဲ့ပါတယ်။
မဟာ အလက်ဇန်းဒါးဘုရင် (Alexander the Great)
(၂) ဇက်ခရီ တေလာ (Zachary Taylor)
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ (၁၂) ယောက်မြောက် သမ္မတကြီး ဇက်ခရီ တေလာ (Zachary Taylor) ကို ၁၉၈၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ သမ္မတမဖြစ်ခင်တုန်းက ဂုဏ်သတင်းမွှေးခဲ့တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (Major General) ဖြစ်ခဲ့ပြီး မက္ကဆီကိုစစ်ပွဲကို အောင်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ စစ်မြေပြင်ပေါ်မှာ သူရဲကောင်းဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံရပေမယ့် စားပွဲထိုင်သမ္မတရာထူးမှာတော့ နာမည်မကောင်းလှ။
ဇက်ခရီ တေလာ (Zachary Taylor)
၁၈၄၉ခုနှစ် မတ်လ (၄) ရက်နေ့မှာ သမ္မတဖြစ်ပြီးမကြာခင် ၁၈၅ဝခုနှစ် ဇူလိုင် (၅) ရက်နေ့မှာပဲ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဇူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့ ကျင်းပတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနေ့ပွဲမှာ သမ္မတကြီးဟာ နို့အေးနဲ့ ချယ်ရီသီးတွေကို တဝကြီး စားလိုက်တဲ့အတွက် ညပိုင်းမှာ ဖျားနာပြီး နောက်နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ သမ္မတသက်တမ်းဟာ တိုတောင်းလှပြီး အဆိပ်ခပ်ခံရတယ်လို့ သံသယရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ရုပ်အလောင်းကို ပြန်လည်တူးဖော်ပြီး စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ အဆိပ်သင့်သေဆုံးတာ မဟုတ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့အတွက် ပထမဆုံးလုပ်ကြံခံရတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ် မှတ်တမ်းမဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ပူပြင်းလှတဲ့ ရာသီဥတုမှာ အအေးစာတွေကို စားမိတဲ့အတွက် အစာလမ်းကြောင်း ရောင်ပြီး သေဆုံးတယ်လို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
(၃) မိုးဇတ် (Mozart)
ဂီတသမိုင်းမှာ ပါရဂူတစ်ဦးအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သြစတီးယားနိုင်ငံသား မိုးဇတ် (Mozart) ဟာ အသက်မရှည်လှပါဘူး။ ရှေးစန္ဒယားနဲ့ တယောတို့ကို ကလေးဘဝတည်းက တီးခတ်ခဲ့ပြီး (၅) နှစ်အရွယ်ကပဲ သီချင်းရေးသားခဲ့ရာ ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်ထိ သီချင်းပေါင်း (၆ဝဝ) ကျော်ကို ရေးစပ်သီဆိုခဲ့ပါတယ်။ ၁၇၅၆ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂၇) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားတဲ့ မိုးဇတ်ဟာ ၁၇၉၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ (၃၅) နှစ်အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ဂီတမှာ ကဝိတစ်ပါးဖြစ်သလောက် ဇနီးသည်ဟာ အိမ်ထောင်ကိစ္စမနိုင်နင်းတဲ့အတွက် စီးပွားရေးမပြေလည်လှပေ။ မိသားစုဝမ်းရေးအတွက် သီချင်းတွေ ရေးသားနေတဲ့ မိုးဇတ်ဟာ ကျန်းမာရေးလည်း ထိခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ မကျက်သေးတဲ့ ဝက်သားပြားတွေကို စားသုံးမိတဲ့အတွက် အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
(၄) အဒေါ့ ဖရက်ဒရစ် (Adolf Fredrik)
အဒေါ့ ဖရက်ဒရစ် (Adolf Fredrik) ဟာ ဆွီဒင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး ၁၇၇၁ခုနှစ်မှာ နတ်ရွာစံခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၁၇၅၁ခုနှစ်မှာ ဘုရင်ဖြစ်လာပြီး နှစ် (၂ဝ) နီးပါး အုပ်ချုပ်သွားပါတယ်။
အဒေါ့ ဖရက်ဒရစ် (Adolf Fredrik)
အစားကြူးတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး ပွဲတော်တည်နေတဲ့အချိန်မှာ အစေခံ (၁၄) ယောက်က အဆင်သင့်စောင့်ကြည့်ရပါတယ်။ ဂဏန်း၊ ပုစွန်၊ ပင်လယ်ငါးသလောက်နဲ့ ရှိန်ပိန်တွေကို အားရပါးရသုံးဆောင်ပြီး အစာအိမ်ရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရေးပြည်ရေးကို စိတ်မဝင်စားဘဲ အစားအသောက်ကြူးတဲ့ မင်းဆိုးမင်းညံ့အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
(၅) ပထမ ဟင်နရီဘုရင် (Henry I of England)
ပထမ ဟင်နရီဘုရင် (Henry I of England) ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ၁၁ဝဝခုနှစ်မှ ၁၁၃၅ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁ဝ၆၈ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ သူဟာ အစားကြူးလှပြီး ငါးလင်ပန်းတွေကို စားမိပြီး နတ်ရွာစံခဲ့ပါတယ်။
ပထမ ဟင်နရီဘုရင် (Henry I of England)
နတ်ရွာစံတဲ့အချိန်မှာ သက်တော် (၆၇) နှစ်ရှိနေပါပြီ။ ကဲ . . . ဒီလောက်ဆိုရင် အစားမကြုးသင့်မှန်း သိလောက်ပါပြီနော်။
အစားကွူးပွီး ကှယျလှနျခဲ့ကွတဲ့ ကမ်ဘာကြျောပုဂ်ဂိုလျမြား
ဂေါတမဘုရားရှငျ ပှငျ့တျောမူတုနျးက ကောသလမငျးကွီးဟာ ဆနျတဈအိတျနဲ့ ဆိတျတဈကောငျတောငျ ပှဲတျောတညျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ အစားအသောကျဆိုတာ သငျ့တငျ့ရုံသုံးဆောငျမယျဆိုရငျ ဆေးဝါးသဖှယျ ကနျြးမာရေးကို အကြိုးပွုပမေယျ့ လှနျကွူးသှားရငျတော့ ဘေးဒုက်ခရောကျတတျပါတယျ။ အခုဆောငျးပါးမှာတော့ သမိုငျးအဆကျဆကျမှာ အစားကွူးပွီး ကှယျလှနျသှားကွတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှရေဲ့အကွောငျးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
(၁) မဟာ အလကျဇနျးဒါးဘုရငျ (Alexander the Great)
ဘီစီ ၃၆၅ ခုနှဈမှာ မှေးဖှားတဲ့ မဟာ အလကျဇနျးဒါးဘုရငျ (Alexander the Great) ဟာ (၃ဝ) အရှယျမှာ အကွီးမားဆုံးအငျပါယာတဈခုကို ခြဲ့ထှငျနိုငျခဲ့ပွီး အိုငျအိုနီယနျပငျလယျ (Ionian Sea) မှ ဟိမဝန်တာတောငျတနျး (Himalayas) အထိ ကယျြပွနျ့ခဲ့ပါတယျ။ ဥရောပတိုကျတောငျပိုငျး ဂရိနိုငျငံ (Greece) မှာ အာရှတိုကျ အိန်ဒိယနိုငျငံအနောကျမွောကျပိုငျးအထိ နယျပယျခြဲ့ထှငျနိုငျခဲ့ပွီး တိုကျပှဲတိုငျးမှာ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ခွငျး မရှိသောကွောငျ့ အတုမရှိစဈခေါငျးဆောငျအဖွဈ ထငျရှားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘီစီ ၃၂၃ခုနှဈ အသကျ (၃၃) နှဈမှာ နတျရှာစံခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ အစားကွူးတဲ့ ဘုရငျတဈပါးဖွဈပွီး နှဈရကျဆကျတိုကျ မအိပျဘဲ စားသောကျတဲ့အခါမှာ ဖြားနာပွီး (၁ဝ) ရကျကွာတဲ့အခါ နတျရှာစံခဲ့ပါတယျ။
မဟာ အလကျဇနျးဒါးဘုရငျ (Alexander the Great)
(၂) ဇကျခရီ တလော (Zachary Taylor)
အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ (၁၂) ယောကျမွောကျ သမ်မတကွီး ဇကျခရီ တလော (Zachary Taylor) ကို ၁၉၈၄ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ (၂၄) ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ သမ်မတမဖွဈခငျတုနျးက ဂုဏျသတငျးမှေးခဲ့တဲ့ စဈဗိုလျခြုပျကွီး (Major General) ဖွဈခဲ့ပွီး မက်ကဆီကိုစဈပှဲကို အောငျနိုငျအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ စဈမွပွေငျပျေါမှာ သူရဲကောငျးဗိုလျခြုပျအဖွဈ မှတျတမျးတငျခံရပမေယျ့ စားပှဲထိုငျသမ်မတရာထူးမှာတော့ နာမညျမကောငျးလှ။
ဇကျခရီ တလော (Zachary Taylor)
၁၈၄၉ခုနှဈ မတျလ (၄) ရကျနမှေ့ာ သမ်မတဖွဈပွီးမကွာခငျ ၁၈၅ဝခုနှဈ ဇူလိုငျ (၅) ရကျနမှေ့ာပဲ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။ ဇူလိုငျလ (၄) ရကျနေ့ ကငျြးပတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံ လှတျလပျရေးနပှေဲ့မှာ သမ်မတကွီးဟာ နို့အေးနဲ့ ခယျြရီသီးတှကေို တဝကွီး စားလိုကျတဲ့အတှကျ ညပိုငျးမှာ ဖြားနာပွီး နောကျနမှေ့ာ ကှယျလှနျသှားပါတယျ။ သမ်မတသကျတမျးဟာ တိုတောငျးလှပွီး အဆိပျခပျခံရတယျလို့ သံသယရှိပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ ရုပျအလောငျးကို ပွနျလညျတူးဖျောပွီး စဈဆေးကွညျ့တဲ့အခါမှာ အဆိပျသငျ့သဆေုံးတာ မဟုတျကွောငျး ကောကျခကျြခနြိုငျတဲ့အတှကျ ပထမဆုံးလုပျကွံခံရတဲ့ အမရေိကနျသမ်မတအဖွဈ မှတျတမျးမဝငျခဲ့ပါဘူး။ ပူပွငျးလှတဲ့ ရာသီဥတုမှာ အအေးစာတှကေို စားမိတဲ့အတှကျ အစာလမျးကွောငျး ရောငျပွီး သဆေုံးတယျလို့ မှတျတမျးတငျခဲ့ပါတယျ။
(၃) မိုးဇတျ (Mozart)
ဂီတသမိုငျးမှာ ပါရဂူတဈဦးအဖွဈ ထငျရှားခဲ့တဲ့ သွစတီးယားနိုငျငံသား မိုးဇတျ (Mozart) ဟာ အသကျမရှညျလှပါဘူး။ ရှေးစန်ဒယားနဲ့ တယောတို့ကို ကလေးဘဝတညျးက တီးခတျခဲ့ပွီး (၅) နှဈအရှယျကပဲ သီခငျြးရေးသားခဲ့ရာ ကှယျလှနျတဲ့အခြိနျထိ သီခငျြးပေါငျး (၆ဝဝ) ကြျောကို ရေးစပျသီဆိုခဲ့ပါတယျ။ ၁၇၅၆ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလ (၂၇) ရကျနမှေ့ာ မှေးဖှားတဲ့ မိုးဇတျဟာ ၁၇၉၁ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ (၅) ရကျနေ့ (၃၅) နှဈအရှယျမှာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ ဂီတမှာ ကဝိတဈပါးဖွဈသလောကျ ဇနီးသညျဟာ အိမျထောငျကိစ်စမနိုငျနငျးတဲ့အတှကျ စီးပှားရေးမပွလေညျလှပေ။ မိသားစုဝမျးရေးအတှကျ သီခငျြးတှေ ရေးသားနတေဲ့ မိုးဇတျဟာ ကနျြးမာရေးလညျး ထိခိုကျလာခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ မကကျြသေးတဲ့ ဝကျသားပွားတှကေို စားသုံးမိတဲ့အတှကျ အူရောငျငနျးဖြားရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။
(၄) အဒေါ့ ဖရကျဒရဈ (Adolf Fredrik)
အဒေါ့ ဖရကျဒရဈ (Adolf Fredrik) ဟာ ဆှီဒငျဘုရငျတဈပါးဖွဈပွီး ၁၇၇၁ခုနှဈမှာ နတျရှာစံခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ၁၇၅၁ခုနှဈမှာ ဘုရငျဖွဈလာပွီး နှဈ (၂ဝ) နီးပါး အုပျခြုပျသှားပါတယျ။
အဒေါ့ ဖရကျဒရဈ (Adolf Fredrik)
အစားကွူးတဲ့ ဘုရငျတဈပါးဖွဈပွီး ပှဲတျောတညျနတေဲ့အခြိနျမှာ အစခေံ (၁၄) ယောကျက အဆငျသငျ့စောငျ့ကွညျ့ရပါတယျ။ ဂဏနျး၊ ပုစှနျ၊ ပငျလယျငါးသလောကျနဲ့ ရှိနျပိနျတှကေို အားရပါးရသုံးဆောငျပွီး အစာအိမျရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။ တိုငျးရေးပွညျရေးကို စိတျမဝငျစားဘဲ အစားအသောကျကွူးတဲ့ မငျးဆိုးမငျးညံ့အဖွဈ ထငျရှားခဲ့ပါတယျ။
(၅) ပထမ ဟငျနရီဘုရငျ (Henry I of England)
ပထမ ဟငျနရီဘုရငျ (Henry I of England) ဟာ အင်ျဂလနျနိုငျငံကို ၁၁ဝဝခုနှဈမှ ၁၁၃၅ခုနှဈအထိ အုပျခြုပျခဲ့ပါတယျ။ ၁ဝ၆၈ခုနှဈမှာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့ သူဟာ အစားကွူးလှပွီး ငါးလငျပနျးတှကေို စားမိပွီး နတျရှာစံခဲ့ပါတယျ။
ပထမ ဟငျနရီဘုရငျ (Henry I of England)
နတျရှာစံတဲ့အခြိနျမှာ သကျတျော (၆၇) နှဈရှိနပေါပွီ။ ကဲ . . . ဒီလောကျဆိုရငျ အစားမကွုးသငျ့မှနျး သိလောကျပါပွီနျော။